काठमाडौँ । सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच आज (बुधबार) भएको पहिलो चरणको वार्ता सकिएको छ । स्थान गोप्य राखेर बिहान साढे ७ बजेबाट भएको वार्ता सकिएको हो । आजको वार्तामा विप्लव समूहले आफ्ना मागहरु राखेका थिए । विस्तृतमा
शशाङ्क कोइराला भन्छन्ः कांग्रेस प्रचण्ड–नेपालसँग मिलेर सरकारमा जानुपर्छ
काठमाडौँ । चर्चित जनवादी गायक जीवन शर्माले लोकगायक पशुपति शर्माको पछिल्लो गीत ‘लुट्न सके लुट...’को शब्द चयनमा ध्यान नपुगेको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको वर्षदिनः कानून निर्माणमा उपलव्धि
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यप्रगति समेटिएको पुस्तक ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको एक वर्ष’ मा पहिलो कार्यप्रगतिको रुपमा कानून तथा कार्यविधि निर्माणलाई उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारबाट समृद्धि सम्भव छैन
अर्थनीति र राजनीति एउटै धारमा गए मात्रै विकास सम्भव : डा. भट्टराई
गलकोट । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थनीति र राजनीति एउटै धारमा गएमा मात्र विकास सम्भव हुने बताएका छन् । नयाँशक्ति नेपालले सुरु गरेको ‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद’ अभियान अन्तर्गत आज बागलुङ पुगेका संयोजक भट्टराईले बागलुङ बजारको लोकतान्त्रिक चोकमा आयोजित सभामा बोल्दै सरकारले अर्थ नीति र राजनीतिको संयोग मिलाउन सकेमा मात्र विकास गर्नसक्ने विचार राखे ।
गाेर्खा भर्ती सन्धीकाे पुनरावलाेकन गर्न सुझाव, महिला भर्ती बन्दै गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले न्याय र समानताका लागि उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समृद्धिकाे अभियानमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनु आवश्यक : प्रचण्ड
आर्थिक क्रान्तिका लागि प्राविधिकले नेतृत्व लिनुपर्छः पूर्वप्रम भट्टराई